पोखरा महानगरको बजेट चार अर्ब
असार २९ २०७४ रासस
पोखरा असार २९ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि रु चार अर्ब तीन करोड ८२ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटमध्ये सरकारबाट प्राप्त सशर्त र निःशर्त अनुदानबाट रु एक अर्ब ८२ करोड तथा महानगरको राजस्व र करबाट रु दुई अर्ब २१ करोड ८२ लाख ५३ हजार रहेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले आजको ...
भीरकोट नगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
असार २९ २०७४ .
स्याङ्जा, असार २९ । पहिलो पटक जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले भीरकोट नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। २० बर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ का लागि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। भीरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छायाराम खनालले नगरपालिकाको सम्मुन्नत विकासका ल...
एनसेलको लाभकर असुल्न सरकारलाई २ महिने अल्टिमेटम
काठमाडौं असार २९ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २ महिना भित्र एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई पुनः सचेत गराएको छ । समितिको विहिबार बसेको बैठकले एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्न अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागलाई २ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिदिएको हो । एनसेलले अझै करिव ३५ अरव पूँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउन बाँकि छ ।...
पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौँ असार २८ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिको वुधबार बसेको बैठकले भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि एक खर्ब ४५ अर्बको बजेट र कार्ययोजना पारित गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा ...
लगानी कोषले २३ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडों असार २८–नागरिक लगानी कोषले २३ प्रतिशत लाभाशं घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक बर्षको नाफावाट कोषले २१.८५ प्रतिशत बानस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.१५ प्रतिशत नगद लाभाशं प्रस्ताव गरेको हो । कोष सञ्चालक समितिको वैठकले मंगलबार घोषणा गरेको लाभांश आगामी साधारणसभामा अनुमोदन भएपछि लगानीकर्ताले पाउनेछन् । अहिले कम्पनीको सेयर मूल्य ३ हजार ९ सय ५० रुपैया...
तोलामा ४ सय रुपैयाँ महंगियो सुन
काठमाडौं असार २८–नेपाली बजारमा बुधबार सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँ महंगो भएको छ । अघिल्लो दिन स्थिर रहेको सुनको भाउ आज भने तोलामा ४ सय रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला ५३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोवार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन सुन तोलाको ५२ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । मंगलबार पनि सोही भाउमा...
मौद्रिक नीति सार्वजनिकः उत्पादनमुलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा
असार २५ २०७४ .
काठमाडौं असार २५–नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो पनि पुर...
सिंहदरवार अब गाउँमै : स्थानीय तहमा आज बजेट भाषण
काठमाडौ असार २५– अधिकांश स्थानीय तहले आज पहिलो स्थानीय बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरुले वर्षभरि हुने खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका असार ३० गतेसम्म ब...
बिजुलीका लागि अमेरिकाले करिव ५२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं असार २३ । विद्युत प्रसारण लाईन सबस्टेसन निर्माण र सडक, सञ्चालन विस्तार गर्न अमेरिकाले नेपाललाई करिव ५२ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले अल्पविकसित मुलुकलाई प्रत्यक्ष सहयोगका लागि भन्दै १३ बर्षअघि स्थापना गरेको मिलोनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसीसी मार्फच उक्त सहयोग नेपालले पाउने भएको हो । ...
आज अझै घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं, असार १९ । हिजो मात्रै २ सय रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य आज थप १ सय रुपैयाँले घटेको छ । आज सुन प्रतितोला ५४ हजारमा झरेको छ । हिजो सुन बजारमा प्रतितोला ५४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य घटेपनि चाँदीको मूल्य आज पनि यथावत नै छ । तीन दिनदेखि यथावत रहेको चाँदी आज पनि प्रतितोला ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल ...